Izongezelelo zeWebra Scraping for Programmerers from Semalt
izicelo ze urllib. I-Selenium iyisakhelo esiphezulu sePython esisebenzisa i-bots ukuze ihlule iphepha lewebhu. Zonke ezi nkonzo aziboneleli ngeziphumo ezinokwethenjelwa; Ngoko ke, kufuneka uzame ezi zandiso ezilandelayo ukuze wenze umsebenzi wakho wenze:
1. I-Data Scraper:
Yandisa isandiso se-Chrome; Iinkcukacha zeDraf Scraper idibanisa idatha ukusuka kumabini asemzantsi kunye neewebhu eziphambili - pizzeria con parco giochi caserta. Abacwangcisi kunye neenkcukacha zingabhekisela kwinani elikhulu lamasayithi ashukumisayo, iiwebhusayithi zezobuntu, ii-portals zokuhamba kunye neentengiso zeendaba. Idata iqokelelwe kwaye ihlatywe ngokwemiyalelo yakho, kwaye iziphumo zigcinwe kwiifom ze-CSV, i-JSON, ne-XLS. Unokukhuphela kwakhona i-website okanye ingxenye epheleleyo kwimiqulu okanye iitafile. I-Data Scraper ayifanelekanga kuphela kubaprogram kodwa ikulungele nabangenalo iprogram, abafundi, ama-freelancers kunye nabaphengululi. Yenza imisebenzi emininzi ngexesha lokutya kunye nokugcina ixesha lakho namandla.
Ngenye isandiso se-Chrome; IWebra Scraper ine-interface-friendly interface kwaye ivumela ukuba senze i-sitemaps ngokufanelekileyo. Ngalolu hlobo, unako ukuhamba ngephepha lewebhu ezahlukeneyo uze uphawule indawo epheleleyo okanye inxalenye. IWebra Scraper iza kwiinguqulelo zamahhala kwaye zihlawulwe kwaye zifanelekile kubaprogram, i-webmasters kunye nokuqalisa. Kuthatha imizuzwana embalwa ukukhafaza idatha yakho nokuyilayisha kwi-hard drive yakho.
Le ngenye yezona zandwendwe ezidumileyo zeFiFiFi; I-scraper yindlela enokuthenjwa kunye enekhono yokukhangela isikrini kunye nenkonzo yokumbiwa kweedatha. Inomsebenzisi-friendly interface kwaye ikhupha idatha esuka kumatafula e-intanethi kunye nezintlu. Idatha iya guqulwa ibe yifom efundekayo neyekekayo. Le nkonzo ifanelekile kumaphulo kunye nokucoca umxholo wewebhu usebenzisa i-XPath kunye ne-JQuery. Sinokukukopisha okanye ukuthumela idatha kwiiGoogle Amadokhumenti, iifayile ze-XSL kunye ne-JSON. Ikhonkco kunye neempawu ze-Scraper zifana nokungenisa. io.
Ifanelekile kumashishini kunye nabaprogram; I-Parsehub ayiyiyo kuphela isandiso se-Firefox kodwa kwakhona i-web yokutsala kunye nokukhwela ithuluzi. I-ParseHub isebenzisa ubuchwepheshe be-AJAX kunye neesayithi ze-scrapes kunye nokulungiswa kunye neekhukhi. Inokufunda nokuguqula amaxwebhu ewebhu ahlukeneyo kwingcaciso efanelekileyo kumcimbi wamaminithi. Emva kokukhutshelwa kwaye kusebenze, i-ParseHub inokuqhuba imisebenzi emininzi yokucoca idatha ngexesha elinye. Isicelo sakho sedeskithophu sifaneleka kubasebenzisi be-Mac OS X, iLinux kunye neWindows. Ingqungquthela yaso yamahhala iqhuba iiprojekthi ezili-15, kwaye icebo elihlawulwa livumela ukuba sisebenze iiprojekthi ezingaphezu kwe-50 ngelo xesha.